"(Hoy Jesosy:) Izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangetaheta indray; fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay; fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay." Jaona 4:13, 4
"Aoka ho avy izay mangetaheta; ary izay mety, aoka izy hisotro maimaimpoana amin’ny ranon’aina." Apokalypsy 22:17
Sarobidy ho an’ny olombelona ny rano, ary tsy maintsy ilainy mihitsy aza, mba hahavelona azy; nefa matetika izy io no lanilaniana foana na ampiasaina tsy am-pitandremana. Mba hahatonga saina ny olona, dia nisy mpanao sarimihetsika iray nanatontosa horonan-tsary nomeny lohateny hoe «Ny hetahetan’izao tontolo izao». Lohahevitra tokony hampandini-tena ny olom-pirenena tsirairay izany.
Fa vitsy kosa ny olona mba misaintsaina ny hetahetan’ny fanahiny, hetaheta fiadanam-po, izany hoe hetaheta fahasambarana, fahazoana antoka, fanantenana. Fony tety an-tany ny Tompo Jesosy, dia niteny tamin’ny vahoaka nomeny sakafo hoe: “Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay” (Jaona 6:27).
Ianao koa ve mba toy izany? Ianao ve mba nitady ka nahita ilay rano manome aina? Io rano io no entin’i Jesosy ho antsika. Izany no nolazainy tamin’ilay vehivavy Samaritana tonga mba hantsaka rano hosotroina (jereo ny teny androany). Fantatr’i Jesosy tsara izy fa manana filana lehibe kokoa noho ny hetaheta ara-batana. Mila fitiavana izy, mila fikarakarana, fanajana, fiadanana ho an’ny fieritreretany. Izany indrindra no tian’i Jesosy homena azy. Nofenoiny fifaliana anaty izy, hany ka nandao ny sininy ary nankany an-tanàna, nanambara tamin’ny olona hoe: “Andeha hizaha izaroa Lehilahy izaroa, Izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra; Izao angaha no Kristy?” (Jaona 4:29). Tsy ela dia tonga ny valin’izany: “Fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao” (Jaona 4:42). Izay nametraka taminy ny fitokisany dia afaka manambara am-pifaliana hoe: “Ny loharanoko rehetra dia ao aminao” (Salamo 87:7).